झुटो रिपोर्ट :: रुमु न्यौपाने :: Setopati
‘मलाई जसरी रूवाएको छौ तिमी पनि एकदिन त्यसरी नै रूनेछौ’ जाँदा जाँदै उसले भनी।
म ऊ सँग २ वर्ष लामो सम्बन्ध तोड्दै थिएँ।
‘म जस्तो माया गर्ने जीवनसाथी तिमीले यो जुनी त के सात जुनीसम्म पनि पाउन सक्दैनौं,’ उसले रून्चे स्वरमा फेरि भनी।
अनायसै मन भारी भएर आयो। आखाँको डिलसम्म आईसकेको आँशु उसले नदेख्ने गरी पुछेर मैले मनमनै भनेँ, ‘ठिक भन्यौ उपासना, तिमी जस्तो जीवनसाथी म कहिल्यै पाउन सक्दिनँ।’ मेरो मन बेचैन भयो। बोल्ने कुरा धेरै हुँदाहुँदै पनि वाक्य फुटेन। मेरो आफ्नै वाध्यता र विवशता थिए। मैले उसलाई सुनाउन सकिनँ वा चाहिनँ।
भिजेको आँखा लिएर ऊ मेरो आँखाबाट स्कुटरको धुँवा उडाउदैं अघि बढी। मेरो सारा सपना र ईच्छा त्यहीँ स्कुटीको धुँवासँगै उडेर गयो। मेरा पाईला लड्खडाए। यस्तो लाग्यो म छिट्टै बेहोस हुँदैछु। जसोतसो घर पुगेँ। जब बाहिरी कोलाहलबाट शान्त वातावरणमा प्रस्थान गरेँ मेरो मन एकाएक कता कता हरायो। कता।
घरबाट लगातार विवाहको दवाव आएपछि ममि र बाबासँग म उपासनाको घर गएको थिएँ। कालीकाली हिस्सी परेकी उपासना अग्ली र आकर्षक देखिन्थी। उसलाई देख्नासाथ मन पर्‍यो।
बुवाआमाकी एक्ली र प्यारी छोरी थिई ऊ। उनको बुवा प्रतिष्ठित कम्पनीमा म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो। केहीबेरको सन्नाटा तोड्दै बाबाले मलाई कुहिनोले हिर्काएर मेरो विचार जान्न खोज्नु भयो। मैले उपासनालाई मन पराएको भाव व्यक्त गरेँ। सबै खुशी हुनुभयो।
तर उपासना… उसलाई म मन पर्‍यो कि परेन? कसैले जान्ने चेष्टा किन गरेनन्? मैले सबैको अगाडि बडो हिम्मत बटुलेर सोधेँ। ‘उपासना जी, तपाईँको विचार के छ?’
मेरो प्रश्न सुनेर त्यो सानदार बैठक कोठामा उपस्थिति सबै जना यसरी हाँसे कि, मानौं मैले कुनै चुटकिला सुनाएँ।
उपासनाले भनी, ‘तिमीले यति छिटो मलाई बिर्सिसक्यौ?’
मैले उसको कुरा बुझ्नै सकिनँ। किन त्यसो भनी उसले? मैले फेरि संकोच मान्दै सोधेँ, ‘मैले कसरी चिन्नू?’ उसले फेरि हाँस्दै भनी, ‘हामी एउटै स्कूलमा पढेका हौं। फरक फरक सेक्सन थियो हाम्रो। मलाई सबैले स्कुलमा उपु भनेर बोलाउँथे याद छ?’
अहो! यतिका वर्षपछि मैले उपुलाई मेरो सामुन्ने देखेँ, तै पनि चिन्न सकिनँ।
‘म तिमीलाई स्कुलदेखि नै मनपराउथेँ। तर तिमीलाई भन्न सकिनँ। धेरैपछि तिमीलाई मैले एक हप्ता अगाडि एउटा मलमा देखेँ। मेरो आँखाले तिमीलाई चिन्न ढिलो गरेन। मैले तिमीलाई बोलाउनै लागेको थिएँ। तर तिमी मेरो आँखाबाट एकैछिनमा ओझेल भईहाल्यौ। मैले घरमा आएर ममी बुवालाई यो कुरा भनेपछि उहाँले तिमीसँग भेट्न खोज्नुभयो। अनि सबैभन्दा रोचक कुरा त यो थियो कि, तिम्रो परिवार र हाम्रो परिवारको चिनजान पहिल्यैदेखि थियो। त्यसैले यो कुरा मेरो लागि सहज भयो।’
उपासनाको यी सबै कुरा सुनिसकेपछि मेरो मन एकाएक गदगद हुन थाल्यो। जोसँग मैले मेरो बाल्यकालको अमूल्य पल बिताएको थिएँ उसैसँग मेरो सम्बन्ध गाँसिदै थियो। त्यो दिन हामीले निकै समय उपासनाको घरमा बिताएर फर्कियौं।
उपासना र म त्यसपछिका दिनमा झनैं नजिकिन थाल्यौं। यसरी नजिकियौं कि जसरी स्कुले जीवनमा नजिएका थियौं।
उपासना र मेरो विवाह एकदमै सामान्य तरिकाले भयो। विवाहपछि पनि म दिनभरी निकै व्यस्त रहन्थेँ। उपासना घरमै व्यस्त हुन्थी। त्यसो त उसलाई मैले आफ्नो अफिस निरन्तरता दिन अनुरोध गरेको थिएँ। तर उसले अरू नै केही व्यवसाय गर्ने भनेर अफिस छोडिदिई।
एक साँझ अफिसबाट घर फर्किने क्रममा धेरैपछि सुदिपको फोन आयो । मैले फोन उठाएँ, उसले भन्यो, ‘के हो यार विवाह गरेपछि हराईस् त?’
‘हैन यार, यसै यसै व्यस्त भएँ,’ मैले जवाफ दिएँ।
‘आईज हामी बनकालीतिर छौं,’ उसले भन्यो।
मैले आश्चर्यचकित भएर फेरि सोधेँ, ‘बनकालीमा के गर्छौ तिमीहरू?’
उसले फेरि मलाई कर गर्दै भन्यो, ‘पहिला यहाँ त आईज, अनि थाहा पाउँछस्।’
उसको कुरालाई धेरै नकार्न सकिनँ। यसै पनि विवाहमा नबोलाएको भनेर रिसाईरहेको थियो। त्यसैले म उसले भने अनुसार बनकाली गएँ। तर त्यहाँ सुदिप मात्रै थिएन। ऊ सँग उस्तै अन्य पाँच युवा थिए। सबै उस्तै उमेर समूहका देखिन्थे।
एक त मैले सुदिपलाई नै चिनेको धेरै भएको छैन। त्यसमाथि उसका साथीबीच बस्न मलाई असहज भईरहेको थियो। केहीबेरपछि सुदिपले मलाई सल्किएको चुरोट दिँदै भन्यो , ‘ल यार एक सर्को तान् खुब मज्जा आउँछ।’ उसले तेर्साएको चुरोट देखेर म झसंग भएँ। मैले अहिलेसम्म चुरोट पिएको थिईनँ। मैले अलि कड्केर भनेँ, ‘नाई यार मैले अहिलेसम्म चुरोटलाई हात लगाएको छैन।’
सुदिपसँगै बसिरहेको राजनले फेरि गिज्याउँदै भन्यो, ‘विचराले अहिलेसम्म चुरोट हात लगाएको छैन रे ! लौन कसैले उसको मुखमा लगेर राखिदेउ।’ उसको कुराले मन चसक्क भयो। मैले मन नलागी नलागी चुरोट पिएँ। एक दुई हुँदै तीन सर्कोसम्म पुग्दा मलाई पनि चुरोटको धुवाँ प्यारो लाग्न थाल्यो।
त्यसपछि बनकालीमा चुरोटबाट सुरू भएको मेरो दूर्व्यसनी गाँजा, चरेसहुँदैं सिरिन्जसम्म पुग्यो। म घर ढिलो आउन थालेँ। उपासनाले हरेक पटक म घर ढिलो आउनुको कारण सोध्थी। तर म केही जवाफ दिन्न थिएँ। ममी र बाबा आजित भईसक्नुभएको थियो मेरो बानी देखेर। यद्यपी उहाँहरूले म कुलतमा लागेको थाहा पाईसक्नु भएको थिएन।
त्यसरात जब म बाथरूमबाट बाहिर निस्किएँ मैले उपासनाको हातमा सिरिन्ज देखेँ जुन उसले मेरो ड्रयरमा फेला पारेकी थिई। मैले आत्तिदैं उसको हातबाट सिरिन्ज खोस्ने कोशिश गरेँ। उसले अचानक मेरो गालामा थप्पड हानी। म पनि के कम मैले पनि आवेशमा आएर उसलाई एक थप्पड रन्किने गरेर हान्दा ऊ भूईँमा पछारिई।
उसको निधारमा चोट लाग्यो। त्यस रात घरमा हल्लाखल्ला भएर सबैले मेरो बारेमा थाहा पाउनुभयो। पहिलोपल्ट बाबा ममीको अगाडि आँखा उठाएर हेर्न सकिनँ। बाबा, ममी खुब रिसाउनुभयो। तर मैले कसैको परवाह नगरी घरबाट निस्केर हिँडेँ।
त्यसैदिनदेखि म कहिले कसको घर, कहिले कसको घर गएर बस्न थालेँ। साथीले पनि पैसा हुन्जेल मात्रै वास्ता गर्दा रहेछन्। जब सबै साथीले छोड्दै गए म फेरि आफ्नो बुवा आमाको शरणमा आएँ। घर आएपछि पनि बाबा ममी म सँग खासै बोल्नुभएन। म मानसिक र शारीरिक दुबै रुपमा कमजोर हुँदै गएँ।
एकदिन अचानक म ज्वरोले थलिएपछि मलाई ममी र बाबाले अस्पताल लानुभयो। एक मात्र छोराको त्यो हालत देखेर उहाँहरूको मन कति क्षतविक्षत भयो होला? अस्पतालबाट जब घर आएँ तब बाबाले भन्नुभयो, ‘तिमीले जे भन्यौं हामीले त्यही गर्‍यौं। तिमीलाई आँखामा सजाएर राखेका थियौं। तर आज बदलामा……’
बाबा यतिमै रोकिनु भयो। पछि पो रिपोर्ट हेरेपछि थाहा भयो- मलाई एड्स भएको रहेछ। म छानाबाट खसेझैं भएँ। मैले यो सब किन र कसरी भयो बुझ्नै सकिनँ। कतै मैले प्रयोग गरेको सिरिन्जबाट त यस्तो भएको हैन? हे भगवान्! यो के भयो? के मेरो आयू छोटिदैं छ?
आज त्यहीँ खबर उपासनालाई दिएपछि ऊ रिसाएर गई। विचरा नरिसाओस् पनि कसरी? सधैभरी पीडाबाहेक केही दिन सकिनँ।
फोनको घन्टीले मलाई गालासम्म आँशु झरेको बल्ल महसुस भयो। मैले बिस्तारै फोन उठाएँ। उताबाट आवाज आयो, ‘रविनजी, म हस्पिटलबाट फोन गर्दैछु। हामी क्षमा चाहन्छौं तपाईँको र हाम्रो अर्को बिरामीको नाम एउटै भएकोले तपाईको रिपोर्ट साटिएछ। तपाईको रिपोर्ट नर्मल छ,’ यति भनेर डाक्टरले फोन राखे।
मेरो खुशीको सिमा रहेन। यस्तो लाग्यो मैले केही थप आयू उपहारको रुपमा पाएँ। मानिसलाई जतिसुकै दुःख र पीडा किन नहोस् उसलाई मृत्यूदेखि डर लाग्दोरहेछ। मैले यो खबर बाबा र ममिलाई भनेँ। धेरैपछि बाबाले मलाई आफ्नो छातिमा टाँसेर अंकमाल गर्नुभयो। मैले उहाँहरूसँग हात जोडेर माफी मागेँ।
मलाई अचानक उपासनाको याद आयो। मैले ममीलाई भनेँ, ‘ममी उपासना त मसँग रिसाएकी छे। तपाई प्लीज उसलाई सम्झाईदिनु न।’ मेरो कुरा सुनेर बाबा र ममि दुबै जना मुसुमुसु हाँस्नुभयो। उपासना पछाडि लुकेर मुसुमुसु हाँसिरहेकी थिई।
उसलाई देखेर मेरो आँखामा आँशु रोकिएन। उसले मेरो आँखाको आशु पुछ्दै भनी,‘अब सबैकुरा बिर्सेर नयाँ जीवन सुरू गरौं। तिमीलाई नयाँ जीवनले पर्खिरहेको छ। धेरैपछि घर घरजस्तो भएको थियो। मलाई त्यो झुटो रिपोर्टले निकै तनाव दियो केही समय। हामीहरू चारै जना रिपोर्ट साटिएको कुरा सम्झेर मजाले हाँस्यौं।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज २, २०७८, ००:२०:००
पछि सर्दा दुख्छ्यौ कि दुख्दिनौ?
म कवि होइन
प्रेम दौडको प्रतिस्पर्धी
घाम र प्रेम
...र उनी फेरि गर्भपतन गर्नबाट जोगिइन्